The Death and Life of John F. Donovan (2018) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
The Death and Life of John F. Donovan 13 Mar 2019
N/A 2018 123 min Drama
GOT ထဲမှာ ဂြှနျစနိုးအဖွဈသရုပျဆောငျခဲ့တဲ့ Kit Harington နဲ့ Thor မငျးသမီး Natalie Portman တို့ အဓိကပါဝငျတဲ့ Drama ဇာတျကားကောငျးဖွဈပါတယျ။ အမရေိကနျရုပျသံဇာတျလမျးတှဲမှာနာမညျရနတေဲ့ John F. Donovan တဈယောကျအနနေဲ့ နောကျကှယျက စိတျဖိစီးမူ့တှလေိငျတူခဈြတာတှအေကွောငျးအပွငျ ဖတဆိုးလေး Rupert Turner ဆိုတဲ့ကလေးပရိတျသတျတဈယောကျနဲ့စာပေးစာယူလုပျမိရာက မီဒီယာအထကျမှာသံသယဝငျလာဖို့ဖွဈလာတဲ့ အခါ . . . ဆေးတှနေဲ့ဘ၀ဆကျနရေတဲ့ John F. Donovan တဈယောကျဘယျလိုတှဆေကျဖွဈလာမလဲ Cele တဈယောကျရဲ့ဖိအားတှနေဲ့ အဲ့ Cele ကို အားကနြှဈသကျတဲ့ ကလေးတဈယောကျရဲ့ဘ၀ကို ပုံဖျောထားတဲ့ ဇာတျကားကောငျးဖွဈပါတယျ။
ဒီဇာတျကားကို ဘာသာပွနျပေးသူကတော့ Wunna Ye Aung ဖွဈပါတယျ။
GOT ထဲမှာ ဂျွန်စနိုးအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Kit Harington နဲ့ Thor မင်းသမီး Natalie Portman တို့ အဓိကပါဝင်တဲ့ Drama ဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲမှာနာမည်ရနေတဲ့ John F. Donovan တစ်ယောက်အနေနဲ့ နောက်ကွယ်က စိတ်ဖိစီးမူ့တွေလိင်တူချစ်တာတွေအကြောင်းအပြင် ဖတဆိုးလေး Rupert Turner ဆိုတဲ့ကလေးပရိတ်သတ်တစ်ယောက်နဲ့စာပေးစာယူလုပ်မိရာက မီဒီယာအထက်မှာသံသယဝင်လာဖို့ဖြစ်လာတဲ့ အခါ . . . ဆေးတွေနဲ့ဘ၀ဆက်နေရတဲ့ John F. Donovan တစ်ယောက်ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲ Cele တစ်ယောက်ရဲ့ဖိအားတွေနဲ့ အဲ့ Cele ကို အားကျနှစ်သက်တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ဘ၀ကို ပုံဖော်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားကို ဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Wunna Ye Aung ဖြစ်ပါတယ်။
Amara Karan Ben Schnetzer Chris Zylka Jacob Tremblay Jared Keeso Kathy Bates Kit Harington Natalie Portman Susan Sarandon Thandie Newton
Alison Louder Amara Karan Ari Millen Ben Schnetzer Brent Skagford Carolyn Fe Catherine Brunet Chris Zylka Connor McMahon Craig Eldridge Dakota Jamal Wellman Ellen David Emily Hampshire Hamza Haq Harry Standjofski Holly Bernier Jacob Tremblay Jane Wheeler Jared Keeso Kathy Bates Katy Breier Kit Harington Leni Parker Lukas Rolfe Manuel Tadros Matthew Raudsepp Michael Daniel Murphy Michael Gambon Natalie Portman Niko Nikolov Pat Kiely Patrick Allard Sangita Patel Sarah Gadon Sarah-Jeanne Labrosse Susan Almgren Susan Sarandon Thandie Newton Trevor Hayes
Option 1 storage.msubmovie.com 582 MB SD (480p)
Option2megaup.net 582 MB SD (480p)
Option3datbu.com 582 MB SD (480p)
Option4uptomega.com 582 MB SD (480p)
Option5yuudrive.me 582 MB SD (480p)
Option6sharer.pw 582 MB SD (480p)
Option9uptomega.com 1.4 GB HD
Option 10 sharer.pw 1.4 GB HD
Option 11 datbu.com 1.4 GB HD
Option 12 storage.msubmovie.com4GB FHD DTS-HDMA 5.1
Option 13 megaup.net4GB FHD DTS-HDMA 5.1
Option 14 datbu.com4GB FHD DTS-HDMA 5.1
Option 15 sharer.pw4GB FHD DTS-HDMA 5.1
Option 16 yuudrive.me4GB FHD DTS-HDMA 5.1